Home News Iyado Ay Bilowdeen Bilihi Kuleelka Iyo Muqdisho Wadooyinkeeda oo Weli Xeran Shacab...
Iyado Ay Bilowdeen Bilihi Kuleelka Iyo Muqdisho Wadooyinkeeda oo Weli Xeran Shacab Badana ay Lugeynayan Cadceedoo Kulul
Shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho aya qaati ka taagan wadooyinka ay xireyn dowlada iyado ay soomaaliya ka bilawdeen bilihii kuleelka soomaaliya.
Qaar ka mid ah Wadooyinka ugu muhiimsan Magaalada Muqdisho ayaa wali xiran, iyadoona dadka Shacabka ay lugeynayaan wadooyinka Magaalada Muqdisho.
Wadooyinka qaar ee Muqdisho ayaa xiran maalintii Saddexaad, waxaana ciidamada Ammaanka ay dadka Shacabka u sheegayaan in aan la ogoleyn in wadooyinka la marsiiyo gaadiidka.
Isgoysyadda xiran ayaa waxaa ka mid ah Tarabuunka, Banaadir iyo sidoo kale meelo kale.
Qaar ka mid ah Shacabka Magaalada Muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyay xirnaanshaha Wadooyinka Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Ammaanka ayaa si weyn u adkeeyay Amniga Magaalada Muqdisho ka dib markii ay soo baxeen digniino ku saabsan Ammaanka Magaalada Muqdisho.